Obodo ndị dị na Germany | Njem akụkọ
Mariela Carril | | Alemania, Ihe ị ga-ahụ
Germany nwere ọtụtụ ebe mara mma maka njem nlegharị anya, ma gafere obodo, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na ihe niile metụtara Agha Ụwa nke Abụọ, enwere obodo mara mma nke a ga-agarịrị.
Ndị a obodo ndị dị na Germany Ha mara mma na nnukwu foto: okporo ámá ndị nwere ihe mkpuchi, ụlọ ndị nwere elu osisi, ụlọ ọrụ ugbo na ọdọ mmiri ma ọ bụ nke nwere àkwà mmiri mgbe ochie ... obodo niile nke akwụkwọ ozi.
1 Ezigbo Homburg
5 Obinna Okeke
Ọ bụ obodo mmiri ọkụ Ọkachamara German. Nwee a ochie castle wuru n'elu ugwu, nke nwere ụlọ elu na-acha ọcha nke ị na-ahụ ọmarịcha obodo na osisi ndị gbara ya gburugburu. Ebe akụkọ ihe mere eme bụ amara.
Na mgbakwunye na obodo ochie ahụ nwekwara akụkụ ọhụrụ ebe enwere ọtụtụ baroque architecture na site ebe a, na-eje ije a nkeji ole na ole, ị nwere ike iru ogige spa na ihe karịrị otu narị afọ gara aga hụrụ eze Thailand n'anya nke na-eleta. Ọ bụrụ na ị nwere oge ị nwere ike ịga na Kaiser Wilhelm-Bad Spa ma na-eje ije n'ubi ya na pavilions, abụọ n'ime ha onyinye sitere n'aka eze Thai.
Na ogige e nwere isi-iyi di ebube, Elisabethenbrunnen, nke mmiri ya na-esi na eriri afọ nke ụwa pụta ma bụrụ otu n'ime mmiri ịnweta mmiri kachasị mma na mba ahụ. Ebee ka Bad Homburg dị? Ihe dị ka nkeji iri abụọ site na Frankfurt ma enwere ụgbọ oloko na-ejikọ isi ihe abụọ mgbe niile.
obodo a bụ n'ime ohia ojii ọ mara mma nke ukwuu. Ihe dị ka mmadụ 5 bi na ya ma nwee ọtụtụ ihe ọ ga-enye ndị ọbịa ya. Enwere ụlọ osisi, ụlọ ndị nwere agba, ọtụtụ ụlọ mmanya, cafes na ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Ọzọkwa, Ọ bụ isi obodo elekere cuckoo, isi obodo ụwa. Kedu ihe na-agaghị echefu? Elekere cuckoo kachasị n'ụwa nke nwere ala abụọ, n'ezie, elekere dị ka ụlọ ma na-arụ ọrụ nke ọma. Ị nwere ike ịhụ cuckoo na-apụta ugboro abụọ n'ime awa n'ụbọchị. Dị nnọọ ka nnukwu elekere dị, ọ dịkwa elekere cuckoo kacha nta n'ụwa.
Nke ahụ dị mma, enwere ọtụtụ clocks cuckoo maka ọrịre na obodo mana na tepeworm bụ nke kacha nta n'ime ihe dị ka sentimita ise ọ nweghị ihe ọzọ. N'ezie enwere ọtụtụ ndị dị ka nke a n'ihi na ọ bụ ihe ncheta nke ị nwere ike ịzụta n'ụlọ ahịa a. dee ya!
Ị nwekwara ike ịga ije na izute Mmiri mmiri kachasị elu na Germany, Triberg Waterfalls ndị mara mma. Ọnụ ụzọ ahụ na-emechi na 5pm ma na-efu ihe dịka euro 4. Ma biko, ahapụla na-anọdụghị ala n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ ka nụrụ ụtọ akụkụ nke kpochapụwo Schwarzwälder Kirschtorte ya na achicha chọkọleti, ude ntụ ntụ, cherị na cherị ndị ọzọ.
Obodo mara mma, otu a ka anyị ga-esi kọwaa obodo na dị n'akụkụ elu nke Rhine Valley, n'etiti osimiri na ugwu nta ndị a kụrụ n'ubi vaịn. Ọ bụ otu n'ime obodo ochie kacha mma echekwara na mba ahụ na a ahụkarị nkwụsị na osimiri cruises. Mana ị nwekwara ike iji ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ oloko rutere.
O nwere okporo ámá ndị gbachiri agbarụ, akụkụ ya mgbidi ochie ochie na ụfọdụ ọnụ ụzọ na ọ bụ kpọmkwem site n'elu mgbidi na ị nwere ike ịnụ ụtọ echiche nke osimiri, obodo na ubi-vine, ochie nnukwu ụlọ na ebe e wusiri ike, ugbu a converted n'ime. ụlọ mbikọ ndị ntorobịa, Werner Chapel nke narị afọ nke XNUMX, St. Peter Church, na Postenturn nke ị nwere ike ịrịgo.
Obodo a ọ dị na ndịda Bavaria, n'ala ala ugwu ndị bụ akụkụ nke Alps nke kewapụrụ Germany na Austria. Ọ bụ obere obodo mara mma nke dị mma ịga leta n'afọ niile, mana ọ mara mma karịa nke a kpuchiri na-acha ọcha nke snow oyi.
Fussen ọ bụ ebe ama ama ama akụkọ ifo nnukwu ụlọ bụ Neuschwanstein, ma e nwekwara Hohenschwangau Castle, na Ugwu Tegelberg... Ọ bụrụ na ị na-aga dị ka di na nwunye, obodo a bụ ihe kasị mma n'ihi na ị nwere ike na-ebi ndụ a oké ihunanya ahụmahụ, rie nri abalị na otu n'ime ogbe ndịda ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na obodo nri, na-a ihe ncheta site na ihe ncheta ụlọ ahịa, buru mbuli elu n'elu. nke ugwu na mechaa na oké echiche.
Kedu ka ị ga-esi ruo ebe ahụ? Nwere ike Were ụgbọ oloko na Munich na naanị awa abụọ nke njem na ọmarịcha echiche ị rutere ebe a.
Es Ihe Nketa Worldwa na ọ bụ na ebe a maara dị ka Romantic Rhine, ebe nwere ọmarịcha obodo na nnukwu ụlọ. Obodo a dị n'akụkụ aka nri nke Rhine, o nwere ụlọ osisi na a ma ama maka àgwà mmanya ọ na-amị. Mmanya ahụ bụ Riesling, dị ka ọtụtụ nke Rhine Valley, mana Assmannhausen ama ama maka mmanya na-acha ọbara ọbara nke mmepụta ya malitere na 1108.
Ubi-vine di n'elu ugwu, ma mb͕e nkpuru-vine di n'oge-ya, a na-esiji ha na-acha uhie uhie, bú ihe-nkiri n'ezie. Amen ka mmanya e nwekwara isi mmiri ọkụ ebe a, ọgaranya lithium, na ọtụtụ ụzọ ụkwụ. Ebe etiti ahụ nwere ụlọ nri na cafes na ụlọ ahịa yana basilica narị afọ nke XNUMX dị ịtụnanya.
Ọzọkwa Ọ bụ akụkụ nke okporo ụzọ Romantic, ụzọ na-aga kilomita 350 site n'oké ọhịa na ugwu na mpaghara Bavaria na Baden-Württemberg. Enwere ọtụtụ obodo na obodo nta n'ụzọ a mana obi abụọ adịghị ya na otu n'ime ihe kacha mma bụ nke a.
Ọ dị ka a obodo akụkọ ifo, nke nwere okporo ámá ndị a kpara akpa, ụlọ ndị mara mma na ọtụtụ osisi. Ọ bụrụ na ị na-aga na December kacha mma bụ ahịa ekeresimesi. Ọ ka na-ejigide mgbidi ochie na obodo ochie, enwere ọnụ ụzọ mbụ isii na otu nwere steepụ dị warara nke ị nwere ike ịrịgo. Ọnụ ụzọ a ga-esi dị kilomita anọ.
E nwekwara ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, ndị German Christmas Museum bụ otu n'ime ha na-emeghe afọ niile. N'ikpeazụ, ị nwere ike mara obodo a na a kpochapụwo ụbọchị njem sitere na Nuremberg.
Bụ ndịda ọdịda anyanwụ nke Germany na ọ bụ obodo mahadum nke ị ga-ama na a ụbọchị njem nke Stuttgart. Enwere nnukwu ụlọ ochie n'elu ugwu nke ị na-ele anya nke ọma, e nwere okporo ámá ndị a kpara akpa iji na-eje ije, ọwa mmiri nke nwere okporo ụzọ na steepụ na steepụ, ahịa na ụlọ ahịa, ị nwere ike ịnya ụgbọ mmiri na osimiri Neckar.
Ọ bụrụ na ị na-aga na December e nwere a chocolate ememme, na ChocolART, nke na-ewe otu izu ma dị mma maka ịnwale ọtụtụ ụdị chocolate. N'akụkụ ị nwere ike ịga avIsit Hohenzollen Castle, Lichtenstein Castle, Bebenhausen Abbey na Bad Uach Waterfall, n'etiti ndị ọzọ.
Ihe nkiri a gbara ebe a Grand Budapest Hotel nke Wes Anderson, mana kwa ihe nkiri ụfọdụ si Akwụkwọ ohi na Ndị Bastards dị ebube, ọmụmaatụ. Ọ bụ ebe mara mma, nke nwere a nnukwu obodo ochie echekwara nke ọma Ebe Silesian Museum na Chọọchị Gothic nke San Pedro pụtara pụtara ìhè.
Bụ na ndịda ọwụwa anyanwụ Germany, n'ókè ya na Polonia, na steeti Saxony. Ị nwere ike izute ya na a ụbọchị njem site na Dresden ma ọ bụ site na Berlin.
Ndị a bụ nanị ụfọdụ n'ime obodo ndị mara mma na Germany. Enwere n'ezie ihe ndị ọzọ na otu nwere ike ịgbakwunye Cochem, Oberamagau, Staufen. Tübingen, Meissen, Quedlinburg, Dinkelsbühl, Goslar, Michelstadt, Miltenberg, Bamberg…
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Alemania » Obodo ndị dị na Germany